Qaboojiyaha Baska, Tababaraha, Baska dugsiga iyo warshadleyda basaska leh iyo SONGZ
Qaboojiyaha Baska, Tababaraha, Baska Iskuulka Iyo Basaska Gaarka ah
Taxanaha SZR, Bas-Dhex-Dhex-Dhex-Dhex ah, 8.5-12.9m Bas, Kabadh Aluminium Fin Aluminium Fin.
Taxanaha SZR waa nooc ka mid ah cutubka sare ee saqafka sare ee qaboojiyaha 8.5m ilaa 12.9m laga bilaabo bartamaha-ilaa-dhamaadka-baska caadiga ah, tababaraha, baska iskuulka ama baska xira. Awoodda qaboojinta ee qaboojiyaha baska taxanaha ahi wuxuu u dhexeeyaa 20kW ilaa 40kW, (62840 ilaa 136480 Btu / h ama 17200 ilaa 34400 Kcal / h). Dhanka qaboojiyaha baska yar ama baska kayar 8.5m, fadlan tixraac taxanaha SZG. Ama waxaad nagala soo xiriiri kartaa sales@shsongz.cn wixii faahfaahin dheeraad ah.
Faahfaahinta Farsamada ee Basaska A / C SZR:
22 kW ama
75064 Btu / saacaddii
24 kW ama
28 kW ama
30 kW ama
26 kW ama
33 kW ama
Dhererka Baska lagu taliyay
Able Lagu dabaqi karo cimilada Shiinaha）
8400 m3 / saac (4)
(Quwada Tufaax leh)
31 kW ama
37 kW ama
34 kW ama
116008 Btu / saacaddii
36 kW ama
40 kW ama
10500 m3 / saac (5)
7200 m3 / saac (8)
SZR-IIF-D Macluumaadka Farsamada SZR-III-D Macluumaadka Farsamada SZR-IV-D Macluumaadka Farsamada
SZR-IVF-D Macluumaadka Farsamada Macluumaadka Farsamada SZR-VD SZR-VF-D Macluumaadka Farsamada
SZR-VI-D Macluumaadka Farsamada SZR-VIF-D Macluumaadka Farsamada
4. Compressor BOCK, VALEO ama AOKE waa ikhtiyaari.
Taxanaha SZR R & D Taariikhda:
SZR taxane qaboojiyeyaal ayaa loo soo saaray si loo buuxiyo shuruudaha muuqaalka sii kordhaya ee qaboojiyeyaasha basaska ee warshadaha baska. Si loo gaaro tayada muuqaalka oo aad u fiican, qalabka hawada ee taxanaha SZR waxay isticmaalaan isku-darka daboolka SMC iyo aluminium isku-darka.
Waxay si wax ku ool ah u xallisaa dhibaatada muuqaalka liidata ee muraayadda gacmaha lagu rinjiyeeyo ee muraayadaha dhaqameed ee saqafka caagga ah ee nidaamka qaboojinta baska. Isla mar ahaantaana, waxay si qoto dheer u hagaajisay nidaamka iyo qaabdhismeedka, iyada oo la tixgelinayo isbeddelka horumarka ee waxtarka sare iyo miisaanka fudud.
Hordhac farsamo oo faahfaahsan oo ah Qaboojiyaha Basaska Taxanaha SZR
1. Daboolka AC: twuxuu daboolaa wuxuu qaataa habka SMC iyo aluminium.
Marka loo barbardhigo daboolka sare ee FRP ee gacanta lagu sameeyo, tayada muuqaalka si weyn ayaa loo hagaajiyaa, celceliska wax soo saarka maalinlaha ah ayaa si weyn kor loogu qaaday. Waxay ku habboon tahay gaadiidka dadweynaha ee heerka dhexe iyo sare iyo basaska dalxiiska.
Fadlan u leexo SUPPRT-FAQ, si aad wax badan uga ogaato farqiga u dhexeeya SMC iyo daboolka muraayada dhalada.
2. Muuqaalka AC: Caato iyo qaabka toosan
Muuqaalka baska taxanaha ah ee 'SZR AC' waa mid toosan, oo leh muuqaal qurux badan iyo naqshad dhuuban. Dhumucda qaboojiyaha waa 188mm, taas oo ka hooseysa dhumucda qaboojiyeyaasha caadiga ah ee hadda jira.
Dhumucda ugu yar 188mm
3. Qaabdhismeedka AC: Qaab fudud
Saldhigga kondenserku wuxuu qaataa qaab loo rogay V-qaabeeya oo aan lahayn qaab dhismeedka qolofka hoose, dhaldhalaalka dhinaca waa mid khafiif ah oo la hagaajiyay, marinka hawo uumiga hawo qaadashadu wuxuu qaatay qaab-dhismeedka foorarsiga qolofka hoose. Iyada oo loo marayo hababka kor ku xusan, miisaanka qaboojiyaha si weyn ayaa loo dhimay.
Isku-xidhka Hawada Laabista Isku-dhafan
Qaabdhismeedka Beam Dhinac Fudud
4. Qaabdhismeedka AC: Adeeg & Dayactir saaxiibtinimo
Daboolka kore ee SZR taxanaha qaboojiyaha wuxuu qaataa qaab dhismeedka isku xirnaanta fiiqan, saxanka daboolkuna uma baahna in laga saaro marka gaariga la raacayo, taas oo si weyn u badbaadinaysa waqtiga rakibidda. Marawaxadda ururinaysa ayaa laga rakibay korka, daboolkuna uma baahna in la furo markii la beddelayo marawaxadda haysa, iyo marawaxadda uumiga ayaa la ilaaliyaa inta lagu jiro dayactirka. Isla mar ahaantaana, waxaa kaliya lagama maarmaan ah in la furo qayb ka mid ah daboolka dhinaca, taas oo ay fududahay in la dayactiro ka dib iibinta.
Qaab-dhismeedka fiiqda uumi-baxayaasha
Qaab dhismeedka hawo-qaboojiye iyo qaab-dhismeedka foosha
5. Waxqabadka AC: Wax-qabad tayo sare leh
SZR taxane qaboojiyeyaasha basaska waxaa loogu talagalay iyadoo loo eegayo qaabdhismeedka hawo-qaboojiyaha hawo-qaboojiyaha, oo ay weheliso ku-dayashada CFD oo ku saleysan natiijooyinka falanqaynta dhabta ah, si loo wanaajiyo habsami u socodka hawo-qabooraha, iyo in la qaato naqshadeynta la hagaajiyay ee socodka aan sinnayn si loo gaaro heerka sare waxtarka kululeeyaha sarrifka Heat.
Falanqaynta CFD ee xawaaraha dabaysha ee kuleylka
6. Waxqabadka AC: Naqshadeynta hagaha gaarka ah ee dabaysha
SZR taxane hawo-qaboojiye hawo-qaboojiye ah ayaa loogu talagalay daboolka hagaha hawo hawo hage. Hoodka hagaha hawada wuxuu qaataa mabaadii'da wareegga ah ee 'Archimedes' iyo naqshadeynta koorta wareega si loo wanaajiyo hay'adda socodka hawada loona baabi'iyo kuleylka caadiga ah ee aan lahayn hagaha hawada. Dhibaatada soo noqoshada hawadu waxay si weyn u hagaajineysaa saameynta is-weydaarsiga kuleylka ee qaboojiyaha.
Dabool faneed gaar ah oo isku uruuraya
Iyadoo loo marayo falanqaynta jilitaanka iyo tijaabinta tijaabada ah, hay'adda socodka hawadu waa mid caqli-gal ah marka leexleeyaha dabaysha la rakibo. Aan shroud lahayn. Qulqulka hawada ka baxeysa waa la kala firdhiyey, oo ifafaalaha dib u soo noqoshadu waa iska cadahay.
Falanqaynta qulqulka hawada oo aan lahayn dabaysha dabaysha & qulqulka hawada leh daboolka hawada
7. Waxqabadka AC: Miisaanka kuleylka qaboojiyaha oo yar
Marka loo barbardhigo qaboojiyaha hawo-dhaqameedka basaska, taxanaha SZR wuxuu qaataa naqshadeynta ku-beddelaha kuleylka iyo naqshadeynta naqshadeynta qalabka dhuumaha gudaha. Yaree lacagta qaboojiyaha 30%. Taas oo yareyneysa saameynta qulqulka qulqulka ee deegaanka.
Hawlaha SZQ ee Basaska AC Casriyayn （Ikhtiyaar）
1. Qaboojiyaha iyo qaboojiyaha qolka darawalka
Qalabka wax lagu nadiifiyo, iyo AC ee ku jira qolka darawalka ayaa lagu rakibi karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha, si loo siiyo jawi raaxo leh darawalka.
3. Tiknoolajiyadda tuubooyinka iyo kuleylka
5. Tikniyoolajiyada baaritaanka xakamaynta fog
Shaqada "xakamaynta daruuraha", xaqiiji kontoroolka fog iyo ogaanshaha, iyo hagaajinta adeegga wax soo saarka iyo awoodaha kormeerka iyada oo loo marayo codsi weyn oo xog ah.
6. Teknolojiyada Nidaamka Tamarta
Codsiga SZR Taxanaha Baska AC:
Horumarinta suuqa iyo hagaajinta heerarka nolosha, basku wuxuu si tartiib tartiib ah uga kordhay qaababka fudud ee fudud ee gaadiidka illaa feejignaan dheeri ah loogu yeesho hagaajinta raaxada iyo deegaanka gaadiidka. Sidaa darteed, rakaabka heerka sare ayaa sii kordhayay sanadba sanadka ka dambeeya sanadihii ugu dambeeyay. SZR waxay diirada saareysaa muuqaalka waxayna ku haboontahay basaska-sare iyo kuwa dhexe. Aragtida suuqa ayaa wanaagsan.
1. Baahida ballaaran ee arjiga
Qeybta hoose ee taxanaha 'SZR' waxay ku habboon tahay qaanso dusha sare leh gacan dhererkeedu yahay 6 ~ 72 mitir, ballaca halbeegga waa 1860mm, marinka hawadana si toos ah ayaa loogu quudinayaa marinnada hawada ee labada dhinac ee baska, taas oo ay fududahay in la rakibo . Taxanaha alaabtu wuxuu leeyahay 8 nooc oo yar ilaa weyn, awoodda qaboojintuna waa 20 ~ 40KW, oo ku habboon basaska 8 ~ 13 mitir.
La jaanqaad kala duwanaanta ballaaran ee foorarka saqafka
2. Xulashada qaabeynta hodanka ah
Taxanaha SZR wuxuu hodan ku yahay qaabeynta kooxaha adeegsadayaasha kala duwan, waxaana jira qaabab kala duwan oo loogu talagalay isticmaalayaasha inay doortaan.
Qaabeynta dhamaadka-sare: badanaa loogu talagalay qaabeynta soo dejinta ee gaadiidka dadweynaha iyo basaska dalxiiska-dhamaadka sare, taageerayaasha iyo qalabyada kale
Qaabeynta dhaqaalaha: Waxaa inta badan loogu talagalay qaabeynta basaska dhaqaalaha, basaska dalxiiska, taageerayaasha iyo qalabyada kale.
3. Kiisaska Codsiga ee Basaska Qaboojiyaha SZR Taxanaha:
Ankai (JAC) 600 Bas oo lagu rakibay qaboojiye SONGZ oo jooga Riyadh (Saudi Arabia)
Ankai (JAC) 3,000 Bas oo lagu rakibay qaboojiye SONGZ oo jooga Riyadh (Saudi Arabia)
Foton 1,000 Bas ah oo lagu rakibay qaboojiyaha SONGZ ee Naypyidaw (Myanmar)
Hore: Qaboojiyaha Mini iyo Midi City Bus ama Bas Dalxiis
Xiga: Xaaladda Qaboojiyaha Dhaqaalaha ee Baska, Tababaraha, Baska Iskuulka iyo Baska Gaarka ah